Yiya eVenezuela ngexesha lokutya-i-Geofumadas
Epreli, 2019 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, Izopolitiko kunye nentando yeninzi
Ndicinga ukuba abanye bayayazi imeko eVenezuela, ndithi ngenxa yokuba ndiyazi ukuba iVenezuela ayiyona indawo yendalo yonke, ngoko ke kukho abantu abangayazi nokuba kuphi. Uninzi lwababandifunayo, baziva kwaye baxhatshazwa ngento ngaphandle, bambalwa bakholelwa ukuba bayazi into eyenzekayo, benza isigwebo xa bengakaze bangene eVenezuela, kwaye ndiqinisekile ukuba abanako kuphila kwiimeko apho, kwabanye kufuneka siphila kuzo zonke iingqondo, ingqondo, ezopolitiko, ezoqoqosho, iimvakalelo.
Ngoko ndicinga uyazibuza ukuba kutheni na isihloko, kakuhle ngenxa yokuba kwakufuneka ukushiya Venezuela, ukuba ndagqiba kunye nomyeni wam xa yenzekile zicinywe yokuqala, siye sathatha iiyure ubuncinane 42 ngaphandle kombane, kungekho manzi, ngaphandle kokuba akwazi ukuthenga akukho nto ukusondla, ukusinda oko kwakukulo friji ukuze kungabi kubola.
Ndiqinisekisile ukuba ukuhlala kukho umdlalo wengqondo, kukuhlaselwa kozinzo lwengqondo, akulula ukuba khona - Ndithi kukho khona ngenxa yokuba awuhlali, usinda- kwindawo apho i-paranoia eqhelekileyo. Clinical lishiya imini okanye ubusuku, clinical xa usiya emsebenzini kwaye andazi ukuba ufika okanye ukuba ungaya ekhaya, clinical xa une 12 emlonyeni ukondla kunye umthombo olunye ingeniso (yeyam) - Ndiyabulela kuThixo I waba baninzi abanalo - kwaye banceda ukugcina intloko yam iqhubekile nangona umzimba uphitshile.
Emva kokuba yingcali yeJografi, ngamalungelo aninzi ayenayo, andizange ndicinge ukuba ndiza kugcina ndiphila kwi-pulelancer. Ukuphinda ndixhaphaze izakhono zam njengomfundisi, umbhali kunye nangaphezulu kunangaphambili.
Khawucinge, 12 imilomo ukondla, telecommuting efuna inkonzo intanethi rhoqo kunye nombane ukuvelisa Boom - Apagón standard wesizwe, Ndicele ntoni ukuba ubomi babantu abaninzi kwakuxhomekeke phezu kwakho, yaye kwenzeka ngolu silelo, ukuze awukwazi kwenza nto, wena invade uloyiko, ukungaqiniseki kwaye ucinge ukuba baya phelisa kunye neenkonzo zakho, ngokuba into ethile kufuneka ukuba kucace gca, ngubani na osebenza komgama veki uhlala yedwa, kwaye olunga kwazanga ukuvelisa.
Bona incommensurable ubunzima kuma kwimeko enjalo, qaphela ukuba wonke kufuneka amanzi okusela ebhafini, ukuba uthe wadla ubuncinane kabini ngemini, bathwale iibhotile 30 litha ngezinyuko ukuya ku 14 floor, okanye 12 (endlwini abazali bam), ucinga ukuba udle konakale ngeeyure 48, ufumanise kukho iyeza likaxakeka efunekayo kwaye wena awukwazi ndiyazithenga nokuba unayo ngathi, kwaye Ndithandaza kuThixo ukuba akukho nto yenzekayo kwaye uzifumane kuze ukukhanya kwaye kuthenga, akukho ngcamango, inene oko ezihlala kuloo meko.
Umdlalo kukuba ukunxiba, ndicinga ukuba kukho moya, ukuze uqhubeke ekususeni inkululeko waza waqalisa amanzi okusela ekuqaleni akuphumelelanga ngenye imini, ngoko ezimbini, ngoko amathathu, sele iminyaka 5 apho banandiphe kuphela inkonzo amanzi okusela kanye ngeveki. I nalo musa ukufuna victimizarme, kodwa umnika nje kubo ushwankathelo lweendima eziphambili abahlala eVenezuela, xa ungenaso kakhulu ezisisiseko, kodwa wena uvukile yonke imihla, wena inkathalo ebalaseleyo abanye kunye nawe - ukupheka, ukuhlamba, ukucoca, kuba nje nam mna bekhaya, umsebenzi 14 ukuba 16 iiyure - ngamanye amaxesha ngakumbi, kunye nokusiwa umsebenzi wenziwe kakuhle kunye nomgangatho.
Ukuzama ukugcina ingeniso, musa ukulahlekelwa ithuba abalinike lona kwaye baqhubeke besinda. Umyeni wam kunye nam, sinqume ukuba ixesha lokushiya, kunye nokulondolozwa okumbalwa kunye nolu luncedo namhlanje olunikeza inxalenye yentsapho, sithatha iibhegi zethu ukuze zisikhokele kwikhondo elingcono. Ewe, ukwenza isinqumo silula, ubunzima beza kamva xa urhulumente wamemezela ukuba inkqubo yombane kazwelonke iyaqhubeka nokungaphumeleli kwaye ukubuyiswa kweenkonzo zombane kuya kuba yingxenye.
Kulungile, ndandicinga oku kuya kuba yinto elula ungathanda simke, kodwa xa esenza to-do uluhlu, ndaqonda ukuba ngemihla phambi kokuba uhambo efunekayo phambili njengoko abathile umsebenzi, ukuze bamnikele into ukunika ukuqonda umphathi wam, ukuba nkqu kule meko yintlekele kakhulu wahlala sizimisele ukuba kuphulukana inyathelo umsebenzi. Saba inkxaso enkulu evela kumzala nomyeni wam, ngubani wacela ukufumana amatikiti uze uhlawule kunye nekhadi lakho letyala, naphezu ekufikeni uza kuzihlawula intlawulo.
izicatshulwa ziye yakufumana moya encinane-yaziwa, ngoLwesibini Matshi 19 kuphela ngeveki kunye nesiqingatha zicinywe yokuqala enkulu. Okumangalisayo le nkampani kwakhona esetwe-iimpazamo zombane kunye moya ngoAprili 2 imini wadlula. Noko ke, ebudeni beveki ka 17 Matshi kulandela nandzu uveza apho wayehlala khona, umama kancinci uzinze, ukuba ibe kweso sixeko, ngoko ke waziswe ukuba wayeza kuchitha iveki ekhaya ukuze bakwazi ukuqhubela phambili umsebenzi.
Sahlala ukususela ngoMvulo 18, yonke into yahamba ngokutyibilikayo, ndiye ndasebenza nzima kunakuqala yogqithe yonke, nje ngoko iinkcukacha ezincane, kwaye nje ukuba imini ndiya kugqiba enye fayile lokugqibela, umbane yesibini kwenzeka i 26 Matshi, ngaloo mini sasifuna kuba sisebenza amaqela, ukuze endlwini yam, amvelisele 14 moya lwezitepsi ndayaphula, ndaya kungena yokothuka, izandla zam zazingcangcazela, lalicinezelekile ephantsi, Ndaba buhlungu gqitha. kudlule iiyure 50, de ekugqibeleni wajika inkonzo yombane ngaloo mini ndagqiba ekubeni ndenze iisutikheyisi, ndandizixelele ukuba basebenzise zonke iiyure imini kangangoko kunokwenzeka, kuba bendingazi ixesha de zibe zezakhe.
Enye yezona zinto zinzima kakhulu ukufumana iminyaka 30 23 wayedla, 30 iminyaka inkumbulo ngakumbi iingubo kuthobeka, Ndathi rhuthu afihliweyo ubuncinane 8 iingxowa iimpahla ukunika kude, ndandisazi kwakukho abantu abaninzi Ndifuna nokuba abe uncedo imfuneko kangaka. Kwisithuba seeyure ezimbini ukuqala ukwenza iingxowa 4 PM, izibane baphuma, bafika 1 AM, umyeni wam wavuka nje zombi, waza wathi kum okwethutyana ebeya kuhlala ephaphile - ukonwabela ukukhanya ndiziva ngathi nto yaye waqhubeka nokulala.
Ukupakisha kwakuyinto yesibindi. Ngamanye amaxesha kubanda.
Emva koko ndabona ukuba kulungile kangakanani kwiphephethi yam kunye nekhefu elingenanto, maya, inja yam indibukele emva kwesikiti sobuso bayo. Andikwazi ukuyeka kwaye ndaqala ukukhala.
Kwaye yee-kusasa, siye saya endlwini notatomkhulu bam, ukuba ndibanike kwezinye izinto, wathi ntle, ngokuzolileyo ndivula efrijini, Baye kuphela iqhekeza lesonka samasi ubudala, amaqanda amathandathu ngumkhenkce, loo mfanekiso into waqhekeza intliziyo yam, kwakukho wabuza ukuba ngubani badla loo mihla, bathi - intombi cwaka, abamelwane ebezingekaqukunjelwa, senze ibhodwe yeembotyi, ukuba sasidla kunye ne-arepa, kunye nezinye iintsuku iqanda la mabini nge-cheated-cheese-.
Zizinto ongenakuze uzifune ukuva, kodwa kwenzeka ntoni, nangona uninzi owaziyo, kufuneka uhlale ulungele into ethile. Yimeko apho uvakalelwa ngathi umdlalo osindileyo, kufuneka ulungele ukuba uyadla, okanye ungadli okanye mhlawumbi unethamsanqa kwaye ukhubazeka - uchitha usuku oluhle, ngaphandle kweengxaki - kodwa ezo ziyizigidi.
Ezi ntsuku zilandelayo ebhankini, ukuthenga amayeza, amanzi, ukugcwalisa iingxowa kunye kwizikhongozeli amanzi soda ngetyuwa, ukuze ugcine abandayo ngakumbi xa uye ukukhanya kwakhona ndibenento nokutya refrigerated. Kwiintsuku ezintathu ngaphambi kokuba wemka, senze ezinye iimvavanyo zegazi, umama, utata, umyeni wam, umzalwana wam, kwaye asebenzise esinye isabelo - umzalwana wam, uyise kunye nonina une igazi kakhulu, nantoni na eyenye ku ukucinga. Ngoku kufuneka ndichithe nemali engakumbi ukuze bakwazi ukuthenga iiprotini ngakumbi, kuba oko kundilulamela ayisekho ngokwaneleyo, siyaqala ukuthatha inyathelo kuthenga kubo tamarillo kunye guava - ubuncinane kufuneka ukuba uzakuyiqala ngaphi.
Ebuya ekhaya, umyeni wam waqala ukwenza suitcase yakhe, yonke into kakuhle, kakuhle, ndide ukufumana umnxeba ovela umhlobo ondixelele Kwakufuneka ukuba ibe kwisikhululo seenqwelomoya kude kube lusuku phambi kuba check in yona owenziwayo ngesandla, ukukhathalela lweempazamo zombane - njengenye silvers zombane moya sele utshiswe, kwaye esinye isiqingatha wayesebenza ukugqiba ngomatshini utata.
Ekugqibeleni sagqiba ekubeni siye ezantsi ukuya kwisikhululo ngoLwesibili 2 AM, ukuphepha naluphi na uhlobo kwengxaki, safika 4 AM, safika kuhlaselwa kwi 9 AM, thina kuqala emgceni, kudlule phezu thina zethu kwaye jika ngasekunene emva kokuba Ngena, anditsho ukuba ukukhanya kwaphuma eCaracas kwaye bekulindele.
Siye omnye bamtyabula, omnye ukuya meko, oku kulandelayo yaba wohlaziyo, Banduluka yonke impahla isandla abalindi Venezuela ukufuna nasiphi na isizathu ekuphononongeni ukurhoxisa imali, ndachitha ndizikhumbuza, yatywinwa ukuthuthelwa uphume. Thina wabeka ngaphandle kwesango waza waqalisa ukukhangela ukuba adle, safika a arepas site kwaye achitha ikhadi kwi kwiakhawunti yam imali, kodwa ingongoma abazange babhalise, ngoko ke imali leyo esithubeni kwaye akutyiwa.
Kakade 12: 45 PM bafika moya, uncedo ngakumbi, kodwa intshukumo loonogada ndaqalisa - eli xesha elinye review- ondichukumisileyo ukuba zangasese, le tyesi balucanda kumatshini yaye wacela eli xesha ukuba ukuvula kwakhona Sisalindele ukubaleka, sibheka i-2: 40 PM, kunye nemizuzu ye-20 yokulibaziseka, kwaye kwinqwelo yonke into yayinokuthula. Sifike kwindawo yokuma emva kweeyure zendiza ze-11 - i-Istanbul - enye yeenqwelo eziphambili ezinzima kakhulu eziye ndadibana nazo, ziyintsikelelo yabantu abaninzi, inzondo ekhethekileyo - into ethile yenkcubeko - kodwa ekugqibeleni amaxesha okulinda i-5 adlula ngokukhawuleza.
Wakhwela moya kwakhona ilibele, imizuzu 20, fika kwindawo oya kuyo kwi 4 PM, ekugqibeleni safika 5: 30 PM. Kwaye umoya ukuchulumacha waziva, ifike ingqondo yam ndambulela nje uThixo ngokundinika ithuba lokuba abaninzi, wabulela Venezuela ngenxa formarme, enkosi usapho lwam mna umphathi wam onothando ukuqonda imeko, nto leyo nangona wayengekho ingxaki yakhe, ukuba zingahlawulwa kwaye uzimisele ukuxhasa kum.
Ekufikeni ekhaya lam elitsha, nditshintshile mna iingxaki abanye kwabanye, ngenxa yokunqongophala kombane evela ukuba uza kusebenza kunye izibane ukuphepha iindleko eziphezulu umbane, inkqubo yothutho kutshatyalaliswa kwafika i ukuthutha kakuhle kodwa sidla - itikiti ngalinye metro ixabisa 2 kowethu, multi-uhambo itikiti minh ezi 70 euro ukukhwela iteksi zibiza phakathi euro 9 kunye 20 ngokuxhomekeke kumgama.
Yenza ukuphuma oku njengale, akuyinto yokunethezeka ebantwini bonke abanokuyenza. Ndimele ndiyivume. Nangona kunjalo, ukuphuma kumxholo ohlukileyo akutshintshi ubomi bakho ngokukhawuleza; ngokukodwa kuba kukho intlungu engathatha ixesha lokuyifumana.
Ubukhulu becala Venezuelans babeqhele ukuya ukuphila ngaphandle ukuhlawula iinkonzo, okanye ukuhlawula imali encinane, kangangoko emele ukugcina inkqubo yezothutho yoluntu, inkqubo yombane kuzwelonke, kunye nezinye izinto ezininzi. Waba yintoni umphumo konke oku?, Ngenxa yokuba ngoku siphila Ukwabiwa Venezuela ngokusekelwe wombane okusela amanzi, ukungabikho kwezinto zokuhamba, ukungabikho kwamayeza, ukunyuka kwamaxabiso, iinkonzo zempilo kwiimeko sub-zabantu, kuquka izinto ezininzi ungabona, ebeka kuphela "Venezuela" kwibhokisi yokukhangela Internet nokufunda ngamnye kwabo amabali.
Kwelinye icala, abo bangazazanga okanye ufuna ukwazi ukuba kwenzeka ntoni e Venezuela ungamsoli-, abo babandezeleka bevela kude mna ukudlulisa ukwanga kunye incam: ukuthobeka kunye nomsebenzi ngaphezu kwabo bonke, ukuba siziva iintlungu, ukudabuka okanye ukunyaniseka, simele siqhubeke, kwabo bahlala khona, ndinokukuxelela nje ukuba ukholo kuphela into efunekayo ukuqhubeka.
Ndiyabulela ngomonde wakho, ngesihloko esivela kwindawo ye Geofundadas. Ndivale isahluko emva kwegama le-2,044, elithetha inxalenye yengxelo yam - kuba ngumphathi wam - kwiiveki ezimbini zokugqibela zomsebenzi.
Thinta uqhubeke phambili.
Post edlulileyo«Edlulileyo #GIS - Ikhosi ye-ArcGIS Pro - ukusuka ekuqaleni
Post Next Izinhlelo zokusebenza kwintsimi - i-AppStudio ye-ArcGISOkulandelayo "